Ikhaya > Imikhiqizo > Umlenze wefenisha > Umlenze wethebula
Umlenze wefenisha wensimbi we-tapered ngokuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, unezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll. . Ukucaciswa komlenze wefenisha wensimbi we-tapered kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
O-rings taperated metal sofa femled Feed Feed Feme Feed umlenze wetafula kusuka ezenzweni ezinhle kakhulu nge-addmith hardware ngentengo enhle ye-craft kanye ne-caric.addith esebenza nge-persite solution service ye-hardware yefenisha.
I-TLT / I-TAPRED Tapered Fenus Leg
Umkhiqizo usetshenziswa kabanzi e-upholstery, ezokwelashwa, ukupakisha, ukwakhiwa, ingubo, ezolimo, ezempilo noma ezinye izinhlelo.
1.Ukuhweba inkampani noma umenzi?
3. Yiliphi igama lokukhokha?
I-Expollellent Ngemuva Kwenkonzo Yokuthengisa: Sinikeza mahhala futhi sihle kakhulu ngemuva kwenkonzo yokuthi zonke izimpahla ziphinde zithengisiwe, uma kukhona icala ngathi, sizoyixazulula inkinga yolwazi lokuqala ngemuva kokunikeza ubufakazi bemininingwane yangaphambilini.
Isampula ye-2.Free: Sinikeza amasampula wamahhala ngokususelwa kwizidingo zakho ezithile zokuhlola ikhwalithi yemikhiqizo yethu. Kubalulekile kithi ukuthola lokho okudingayo ngqo.
I-3.Fast Delivery: Sithembisa i-oda lakho lizothunyelwa kungakapheli inyanga eyodwa lapho setholwe idiphozithi. Ngesikhathi esiphithizelayo, isikhathi sethu sesikhathi sidinga ukulungiswa ngokufanele. Ukwaneliseka kwakho okuphelele kubaluleke kakhulu eqenjini lethu.
H100mm, H120mm, H150mm, H170mm, H180mm, H200mm, H350mm, H300mm
Mnyama ngegolide, egolide, emnyama, i-chrome
Amasampula azolungiswa ukuthumela ngezinsuku ezi-3 ezisebenzayo nge-Express efana ne-DHL, ups, TNT, FedEx noma i-EMS
1. Kukhiqizwe ngensimbi esezingeni eliphakeme njengento eluhlaza, ukwelashwa okuhle kwe-vacuum turuum, okwenza kube yikhono lokuthinta kanye nekhono elihle kakhulu lokumelana nomoya wokufafaza usawoti.
2. Inqubo yokushisa okushisa kakhulu, igebe elinamanzi alikhathazeki ukwephula, ukushibilika okuqinile, ukuzinza okuqinile, umphumela ophakeme wokuthwala umthwalo.
3. Ifakwe i-Plastic Anti-Slip Cushion ukugwema ukulimaza phansi phansi futhi kuqede umsindo we-nosy ongaletha isipiliyoni sakho esingcono.
4. Isicelo se-Multi-Scene, elungele kakhudlwana esihlalweni se-TV esindayo, amakhabethe, amakhabethe, umbhede we-ottoman, ifenisha yetheshini yetafula, imilenze yombhede wesofa, imilenze yefenisha isethwe, njll.
5. Amasayizi ahlukahlukene nemibala iyatholakala ukuze ukhethe isicelo sesehlakalo sakho.
6. Idizayini yokubukeka elula futhi yemfashini ayinqunyelwe ngesitayela sokuhlobisa, futhi izitayela ezahlukahlukene zingasetshenziswa ngokuphelele.